Weeraryahanka Porto Hulk Oo Jecel Inuu Ka Ciyaaro Horyaalka Premier League ama La Ligaha - jornalizem
Weeraryahanka Porto Hulk Oo Jecel Inuu Ka Ciyaaro Horyaalka Premier League ama La Ligaha
Weeraryahanka Porto Hulk ayaa qirey in uu jecel yahay in uu ka tago kooxdaas isla markaana uu ka mid noqdo ciyaaryahanada ka dheesha horyaalka Premier League ama La Ligaha isagoo ku tilmaamay inay yihiin labada horyaal ee dunida ugu weyn.
26-jirkan oo dhaliyey 52 gool 96 kulan oo uu u saftay Porto ayaa lala xiriirinayay dhowaan kooxo dhowr ah sida Chelsea, Real Madrid iyo Paris Saint-Germain.
Kadib markii ay soo dhamaadeen tartanka Olympicska oo uu dalkiisa Brazil u ciyaarayay ayuu hadda sheegayaa ciyaaryahankan in u soo jeestey ciyaaraha aan ahayn kuwa qaramada waxana uu tilmaamay in England iyo Spain ay yihiin dalal uu jecel yahay in uu ka ciyaaro.
“Waxaan albaabka u furay in aan koox kale oo horyaalo kale ah u wareego,”ayuu Hulk u sheegay weriyaasha.
“Waxaan jecleystey in aan ka ciyaaro Premier League ama Spanish Liga, waayo waa tartan adduunka oo dhan laga xiiseeyo lagana daawado.
“Kalama aan hadlin wax badan wakiilkeyga fursada aan u helayo in aan ka wareego kooxdeyda sababtoo ah waxaa i horyiil xil qaran ee iga saarnaa ciyaaraha Olombikada.
Hulk oo sii hadlay ayaa yiri:”Tan waxay noqon kartaa waqtigii aan dhaqaaqi lahaa.Waxaan farxad ku dareemayaa in aan u wareego kooxo kale meesha i soo jiidatana waa horyaalka Premier League.”
Qandaraaskiisa Porto waxaa lagu burburin karaa 78 million oo Pound una dhiganta [100m euros], waxayna taas ka dhigeysaa in ciyaaryahankan reer Brazil ay soo codsan karaan oo kaliya kooxaha lacagta badan leh.
Waxana uu weeraryahankan sheegay in uu wadahadalo la geli doono wakiilkiisa bilowga toddobaadka soo socda.
“laga Bilaabo Isniinta waxaan ka hadli doonaa mustaqbalkayga,”ayuu sii raaciyey.